Fanampenam-bava · Oktobra, 2021 · Global Voices teny Malagasy
Fanampenam-bava · Oktobra, 2021
Tantara mikasika ny Fanampenam-bava tamin'ny Oktobra, 2021
Eoropa Afovoany & Atsinanana 15 Oktobra 2021
Sady mpiantraika mivantana no tena manahirana tokoa ny fiantraikan'ny fehezan-dalàna misahana ny 'kasinga vahiny' ao Rosia amelezana fampitam-baovao sy firaisamonim-pirenena. Tondroina ho 'fahavalom-bahoaka' ry zareo amin'izao fotoana izao.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 12 Oktobra 2021
Mandràra ireo Qatari izay voasokajy ho "nampidirina" fa tsy "teratany" tsy hilatsaka kandida amin'ny fifidianana ary mandràra azy ireo tsy hifidy, na izy roa ny lalana vaovao mifehy ny fifidianana ho avy.
Afrika Mainty 12 Oktobra 2021
Na dia tsy mazava aza ny antony, ny hetsika ataon'ny Twitter dia ahafahana mihevitra fa tsy te-hiditra ao anatin'ny raharaha politika ao Ghana tahaka izay ataony ao Nigeria izy, eny fa na dia midika ho tsy fiarovana ny zo ankihin'olompirenena aza izany.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 04 Oktobra 2021
Hatramin'ny naha-voafidy azy ho filoha tamin'ny taona 2014, manodidina ny "100.000 ny olona voampanga ho manaratsy ny filoha," sy manitsakitsaka ny andininy faha-299 amin'ny fehezan-dalàna famaizana